China Forged Aluminium Wheel Yekutengesa Mota Kugadzira uye Fekitori |Hanvos
Item Name Nyowani modhi inosimudzira vhiri hub yeAudi
Color Sirivha, Nhema, Matt Nhema, Nhema/Muchina kumeso kana muromo, Hyper sirivheri, Hyper Nhema, Sputtering, Chrome kana zvimwe.
Motokari Model For Audi
Package Content 1 PCS/katoni
Nzvimbo Yekwakabva Ningbo, China (mainland)
OEM uye ODM Mauya
Delivery Nguva 3-7 mazuva emasampuli, 30-45 mazuva ekuraira
Chikwata chehunyanzvi chekupa mazano chinokupa iwe online Q&A masevhisi.Isu takaverenga vatengi vanopfuura zviuru gumi nemukana wekupindura mukati memaminitsi makumi matatu ndeye 99.7%.
Kuti tiite kuti vatengi vedu vagamuchire zvinhu nenguva uye nekuchengeta kiredhiti yakanaka yekambani yedu, tichaita zvatinogona kuti tive nechokwadi chekutumira kwakadzikama uye kwakavimbika uye kumisa nzira inodzoreka yekubatana.
Chikwata chedu chave chichiita kutengeserana kwepasirese kwe8 makore uye ine hupfumi hweruzivo mune zvepasi rose Logistics, zvekufambisa uye kutengeserana, saka tinokwanisa kupa vatengi rutsigiro nerubatsiro.
KUOngorora Unhu Hwakasimba
Isu tine nyanzvi dzemhando dzekuongorora dzinoita ongororo yechigadzirwa chefekitori yega yega, iyo inova nechokwadi chekuti zvigadzirwa zvinounzwa kumutengi zvinogutsa mhando uye zvakatemwa zvinodiwa.
Kana iwe uine chero mibvunzo kana uchida chero rubatsiro kubva kwatiri, ndapota inzwa wakasununguka kutibata nesu pane trademanager.
Tichaedza nepatinogona napo kupindura mibvunzo yako mukati memaawa makumi maviri nemana;kumwe kunonoka kungakonzerwa pakupera kwevhiki kana pazororo.
Tinogona sei kuvimbisa kunaka?
Nguva dzose kuongorora kwekupedzisira kusati kwatumirwa
Sei uchifanira kutenga kubva kwatiri pane vamwe vatengesi?
Isu tiri nyanzvi dzakanakisa pakutenga zvese zvikamu zvemotokari.Isu tine hukama hwakanakisa nevagadziri vezvikamu zvemotokari.Uye isu tine yakanakisa kupa kwauri nezve ese emota zvikamu.
Isu hatigamuchire kudzoka kwezvigadzirwa kana vatengi vakafunga kuti zvigadzirwa zvine ruzha, kuzunguzika, zvinhu, ruvara uye zvichingodaro zvisingaenderane nezvavanoda.Chero chinhu chakaiswa uye chakashandiswa hachichakodzera kudzoserwa chero mamiriro ezvinhu.
Mari yekutumira ichatakurwa nemutengi;ndapota rongedza zvakanyatsonaka uye isu hatigamuchire zvigadzirwa zvakakuvadzwa panguva yekutumira.
Zvakapfuura: Super Hunhu hweForged Aluminium Alloy Wheel kana Rims
Zvinotevera: Forged Alloy Wheel Rim
Yakagadzirirwa Forged Aluminium Alloy Wheels yeLan...
Aluminium Yakagadzirirwa Forged Alloy Wheels yePas...
Customization Wheels Mota 18-24 ″ Rims Mota ...